Posted by ကေဂျွန် | August 25, 2008, 5:08 am
ဗိုလ်ချုပ်ကို ကြည့်ရတာ ကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလွန်းတယ်။
Posted by tootoolayy | October 18, 2008, 8:13 am
Posted by khinpyi | December 20, 2008, 9:22 am
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေပဲ အစ်မ ဆီမှာ အများကြီးရှိတယ် လိုချင်ရင်ပြော အလကာတော့မရဘူး
Posted by naw say | December 26, 2008, 4:33 am
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ… ၊ တကယ်ကို ရှားရှားပါးပါးပဲ….
Posted byီDaywalker | January 25, 2009, 2:36 am
Posted by Thinker | February 2, 2009, 7:55 am
အခုလို ရှားပါးပုံလေးတွေတင်ပေးထားတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုက်ထဲကိုကူးထည့်ချင်နေတာအတော်ဖြစ်သွားတယ်။
Posted by သက်တန့်ရောင် | February 8, 2009, 7:09 am
Posted by hololodilolo | February 13, 2009, 7:25 am
ကျနော့် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ချစ်စွာသော ဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေတင်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးပါ။ လေးစားစွာဖြင့်
Posted by shwezinyaw | February 14, 2009, 7:11 am
Posted by jasmine | February 17, 2009, 4:43 am
ကျေးဇူးအလွန်တင်မိပါတယ်….ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းစဉ်းစားမိရင် နှတသဖြစ်မိသလို လေးစားမိတယ်………….တကယ့်ကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင့်တယ်……ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာ စိတ်ကူးသက်သက်သာဖြစ်တယ်လေ…………ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ဘုရင်မဖြစ်စေချင်တယ်
Posted by ROYAQUEEN | February 22, 2009, 3:10 pm
thz u for i see this poto
Posted by စိန်းဝင်း | March 5, 2009, 4:59 pm
Posted by ဖိုးဆန်း | April 9, 2009, 7:54 am
Posted by Spore | May 5, 2009, 1:27 am
Posted by စစ်သည်ဟောင်း | May 18, 2009, 9:10 am
Posted by ဇင်မင်း | May 25, 2009, 6:00 pm
Thank you for your Bogyoke Aung San Photo
Posted by Khin Thida | June 4, 2009, 10:17 am
ရှားပါးတဲ. ဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေကို တင်ပေးတဲ.အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Posted by minmin | June 11, 2009, 10:21 am
ဒီနေ့မှ ဟိုသွားဒီသွားလုပ်ရင်း တွေ့လို့ဝင်လာတယ်ဗျ။ ခုလိုတစုတစည်းထဲ တွေ့ရတော့ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ စိတ်ထဲမှာတခုခုလည်း ဖြစ်…သွားသလိုဘဲ၊လုပ်သင့်တာတွေထဲကတခုကို လုပ်ပေးထားတာ.. ဝမ်းသာလှပါတယ်
Posted byွG9| June 16, 2009, 11:13 am
Posted by PeaceMaker | July 27, 2009, 9:35 am
Posted by မောင်အိုး | July 28, 2009, 11:14 am
Posted by အလင်း | August 10, 2009, 10:08 am
Posted by koုtawthar | September 17, 2009, 6:25 pm
Posted by yawnetthan | September 30, 2009, 6:12 pm
Posted by Z | October 3, 2009, 12:27 am
Posted by ရဲနိုင်ထွန်း | November 11, 2009, 9:21 am
Posted by မောင်ချစ် | November 24, 2009, 10:16 am
Posted by maychin | December 3, 2009, 11:53 am
အခုလိုရှားပါးပုံလေးတွေကို မြင်ခွင့်၊ ကြည့်ရှုခွင့်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်ဗျာ…
Posted by light | January 7, 2010, 2:24 pm
မွေးလာကတည်းကစပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတွေကို ကျောင်းစာအုပ်နဲ့ ပိုက်ဆံအကြွေတစ်ချို့မှာ မြင်ဘူးခဲ့ပြီး ဒီလိုပုံတွေရှိမယ်ဆိုတာ မထင်ခဲ့ပါဘူး။။ အခုလို ဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေ မြင်ခွင့်ရအောင် တင်ပေထားတဲ့ အစ်ကိုကို ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လဲလဲကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Posted by မကလေး | January 7, 2010, 4:21 pm
Posted by zonnnn | March 28, 2010, 6:54 pm
Posted by tigerlay | April 30, 2010, 1:28 pm
This is good that we can take the loans and that opens new possibilities.
Posted by Lola22Stephenson | July 13, 2010, 4:19 am
Posted by char2lan | July 16, 2010, 7:30 am
how can i see this photo
Posted by yadanarmyat90@gmail.com | July 16, 2010, 11:14 am
“ ဒဏ္ဏာရီမဟုတ်တဲ့ သမိုင်းရဲ့ သူရဲကောင်း” ပုံကို ခုလိုတစ်စုတစ်စည်းထဲ တင်ပေးထားတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်… ဓါတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း ကူးယူသွားပါတယ်..
Posted by yenaingwin | July 17, 2010, 1:25 pm
တကယ် ကိုကျေးဇူး တင်ပါတယ် ဗျာ
Posted by ko soe | July 18, 2010, 11:02 am
Posted by ပန်းနှင်းဆီ | January 26, 2011, 2:47 pm
ဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေကို အကုန်နီးပါး ယူသွားတယ်နော်..။
Posted by ပန်းနှင်းဆီ | January 26, 2011, 3:51 pm
Posted by sai sai | August 21, 2011, 4:20 pm
အသက်(၂၀)ကျော်ကျော် အညာသားကောင်းလေးတစ်ယောက်က ဗြိတိသျှအင်ပါယာကြီးကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့တာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ပါ….
Posted by ကောင်းထက်လင်း | October 9, 2011, 1:44 pm
ရှားပါးသောအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး၏ သမိုင်းဝင်ဓါတ်ပုံများကို ရှာဖွေတင်ပြပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။အခြားသောလွတ်လပ်ရေးံခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ သမိုင်းဝင်ဓါတ်ပုံများကိုလည်း တင်ပြစေလိုပါသည်။ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်။
Posted by ပြည့်ပြည့် | December 24, 2011, 9:03 am
Posted by tunlinaung | January 16, 2012, 3:38 am
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကူးထားလိုက်ပါတယ် ။ လေးစား ၊ မြတ်နိုး ရလို့ပဲပေါ့ ။ ကျေးဇူး ။
Posted by သူရလင်းဆက် | January 20, 2012, 6:43 pm
ကျက်သရေရှိတဲ့ပုံတွေ တွေ့ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်ပါတယ်
Posted by wout yi | July 5, 2012, 1:32 pm
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ပုံကို အများသူငါ မြင်ဖူးသလောက်ပဲ မြင်ဖူးခဲ့တာပါ..အခုလို ရှားပါးတဲ့ တန်ဖိုးကြီးပုံတွေကို တွေ့မြင်ကြည့်ရှုခွင့်ရတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုအံ့ဘုန်းမြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Posted by မိုးည | August 12, 2012, 9:20 am
ကျေးဖူးပဲနော် အခုလိုစုစည်းတင်ပြပေးတဲ့အတွက်ပါ အဲလိုကတွေ့ရခဲတယ်လေ နောက်လည်းထပ်တင်ပေးပါအုံးနော်
Posted by htetmhuein | August 14, 2012, 2:22 pm
Posted by than htut oo | December 1, 2012, 5:58 am
တက္ကသိုလ်နေဝင်းရေးသော ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း စာအုပ်များနှင့် မြဒေါင်းညို ရေးသော ရဲဘော်သုံးကျိတ် စာအုပ်များတွင်ရှိပါကြောင်း
Posted by မုန်းထူးခမ်း | December 6, 2012, 3:41 pm
မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးရဲ့ ရှားပါးပုံများကို စုစည်းပေးထားတဲ့အတွက် နောင်လာနောက်သားများ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် အားလုံးကို saveလုပ်ထားလိုက်ပါတယ် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Posted by kyukyulwin | February 11, 2013, 12:02 pm
Posted by အာဇာနည် | February 12, 2013, 11:16 pm
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ အခုလိုဗိုလ်ချုပ်ပုံတွေတင်ပေးလို့ မဟုတ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (14) ကျ သတိရလိုက်ကြတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့က မေ့နေလိုက်ကြတာ တော်တော်လည်းတရားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာ
Posted by kyawmyothant | February 13, 2013, 4:17 am
ကောင်းပါတယ်ဗျာ အခုလိုဓါတ်ပုံတွေကို တစုတစည်းတည်း တင်ပြပေးတဲ့အစ်ကို့ ကို ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်
Posted by ဇေယျာ | November 16, 2013, 2:21 pm
Posted by Bo | February 8, 2014, 6:36 am